Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-India Breaking » Kushone oyedwa, inqwaba yabalahlekile enhlekeleleni yezikebhe ezimbili eNdiya
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba ngesikebhe • Izindaba ze-India Breaking • Izindaba • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba Ezihlukahlukene
Abantu abaningi balahlekile ngemuva kokushayisana nezikebhe ezimbili eMajuli, eNdiya.
Izikebhe ezimbili zabagibeli zishayisene ngqo eNdiya.
Isikebhe esincane sabagibeli siginqika engozini yaseNdiya.
Okungenani umgibeli oyedwa wesikebhe wabulawa enhlekeleleni.
Izikebhe ezimbili ezithwele abagibeli ezihamba ngezindlela ezihlukile zishayisene ngqo eBrahmaputra River kuya enyakatho yedolobha laseJorhat, elisenyakatho-mpumalanga ye-Assam, eNdiya.
Kubikwa ukuthi bebengaphezu kwekhulu abantu ezikebheni, iningi labo lisadukile futhi lisaba ukufa.
Izithombe ezisakazwa ku-inthanethi zikhombisa isikebhe esikhulu, esisindayo, ebesithwala abagibeli kanye nezimoto eziningi, sishayisa esikebheni esincane sabagibeli.
Amancane isikebhe iginqike masishane ngemuva kokushayisana, ingena ngaphansi kwamanzi ngemizuzwana nje yengozi, ividiyo ephazamisayo okusobala ukuthi ithwetshulwe ngumgibeli embukisweni omkhulu wesikebhe. Abantu baphume ngejubane emkhunjini ocwilayo, izimpahla zabo zintanta.
Akukho lwazi ngabalimele abangahle litholakale ngokushesha.
Izikebhe zisetshenziswa kakhulu ukuthutha ku India. Izingozi zezikebhe zivamile ngenxa yokugcwala kwabantu kaningi nokungalondolozwa kahle kanye namazinga okuphepha.